Imvunge kumiswa amaNazaretha oKhozini | IOL
Kuthiwa sekuphele inyanga zimisiwe izintshumayelo zamaNazaretha emsakazweni ngemuva kwesimangalo okuthiwa sifakwe wuhlangothi lwaseThembezinhle.UMHOLI webandla iNazarites Church of God uMfundisi Mthembeni Mpaza okumiswe izintshumayelo zakhe oKhozini FM.Uhlangothi lwaseThembezinhle lusola uMfundisi Mthembeni Mpanza weNazarites Church of God ngokuthi ubebuye akhulume ngendaba yecala lombango eliphakathi kohlangothi lwaseBuhleni neThembezinhle uma eshumayela emsakazweni.
Uhlangothi lwaseThembezinhle yilona futhi olwamisa izintshumayelo zabaholi baseBuhleni ngoba lukhala ngokuthi babebangcofa emoyeni.
Kulezi zintshumayelo bekushintshana uhlangothi lwaseKuphakameni nolwamaNazarites.
UNobhala-jikelele wohlangothi lwaseKuphakameni uMnuz Thetha Ngiba, ophinde akhulumele ibandla, uthe badumele ngesinqumo soKhozi sokuvala izintshumayelo zebandla lamaNazaretha.
“Okusiphethe kabi kakhulu wukuthi akekho umuntu owasazisa kahle ukuthi izintshumayelo zimiselweni saze sathola ngoba sesizibuzela thina. AboKhozi bathi kunenkinga ephakathi kweThembezinhle neBuhleni ephoqe ukuthi kumiswe zonke izintshumayelo zamaNazaretha. Esikubuzayo wukuthi thina singenaphi odabeni lwaseBuhleni neThembezinhle,” kusho uNgiba.
Uthe sibaphethe kabi isinqumo soKhozi ngoba ngeke uma kuthiwa kuxabene amahlelo amabili ebandla lamaKrestu bese kumiswa amaKrestu wonke.
“Le nto abayenzayo ikhomba ukuthi vele bebesicuphile bengasasifuni emoyeni,” kusho uNgiba.
Uthe kabeneme futhi ngomphathi wezinhlelo oKhozini uNksz Zandile Tembe.
“Udadewethu uZandile akatholakali uma ufuna ukukhuluma naye, ngisho ungambhalela akaphenduli, okwenza sibone ukuthi inkulu inkinga,” kukhala uNgiba.
Kukhulu ukukhala ngesinqumo soKhozi kumaNazaretha njengoba abanye abazalwane baleli bandla bethumelele Isolezwe izincwadi bezwakalisa isikhalo sabo ngokumiswa kwezintshumayelo.
Okhulumela iThembezinhle uMnuz Nkululeko Mthethwa uvumile ukuthi yibona abafaka isimangalo enhlanganweni iBroadcasting Complaints Commission of South Africa (BCCSA) kodwa wanqaba ukwenaba kakhulu wathi udaba lusasetshenzwa.
Kuze kwashicilelwa bengatholakalanga abakwaBCCSA kanti nasohlwini lwamacala angene kule nhlangano olushicilelwe kwi-website kaluveli olwezintshumayelo zamaNazaretha.
Ethintwa uMfundisi Mpanza uthe kukhona uhlangothi olwamumangalela kodwa wathi akathandi ukukhuluma kakhulu ngalolu daba ngoba iSABC isalucubungula.
UNksz Tembe woKhozi uthe ngeke aphawule ngalolu daba ngoba lunemixhantela yomthetho, kumele kuthintwe umphathi wesiteshi uMnuz Bonga Mpanza.
Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engakatholakali uMpanza ukuphawula kanti nokhulumela iSABC, uMnuz Kaizer Kganyago, akatholakalanga.SHOW ALLIsolezweHeady goea hereBashaye umuzi wekhanselaImidlalo kuTV ngale mpelasontoUyise wayengayizwa eyokuba yibhokisa'Asifuni ukufaniswa neligi yaseMzansi'Most ReadBayameseka abazali uBabes WodumoKuthiwa akaganwe umfundisi wodumoUbuyela kuPSL uDikgacoiUNgqongqoshe uchitha izinsolo ze-IFPAbanye abafundi abakhala ngokucwaswa ngokwebalaAdvertisementMOREisolezweMenu Izindaba|Ezokungcebeleka|Ezemidlalo|Intandokazi|Ezemisakazo|Ezezimoto|Classifieds|isolezweMenu Izindaba|Ezokungcebeleka|Ezemidlalo|Intandokazi|Ezemisakazo|Ezezimoto|Classifieds|INFOAbout IOLFront pageMarket indicatorsMovie guideNewspapersTV guideWeatherSITESBabyNet.co.zaGlamour.co.zaGQ.co.zaIlisolezweIsolezweIOL JobsIOL PropertyIOL SportzoneLoot.co.zaClassifiedsWomanOnlineSECTIONSNewsBusinessSportMotoringTonightLifestyleTravelScitechOlympicsAbout IOLFront pageMarket indicatorsMovie guideNewspapersTV guideWeather